Wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka Denni & Karaash
May 22, 2020 Mahad Jama 23
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Khilaafka Denni iyo Karaash oo soo maray marxalado kala duwan ayaa cirka galay maalmihii ugu dambeeyey, kadib markii ay fashilmeen waan waan iyo wada hadal laga dhex waday labada hogaamiye.
Denni oo magacaabay taliyaha ciidamada madaxtooyada iyo ku xigeenkiisa ayaa Karaash wareegto kale ka kor keenay, taas oo burinaysa wareegtada Denni isagoona u cuskaday la tashi la’aan.
Kooxda Aaran Jaan oo talooyin kala duwan u jeediyey Denni ayaa ku booriyey in awood dhaqaale iyo mid ciidan uu u adeegsado Karaash si uu meesha uga saaro taas badalkeedna laga badalo Cabdi Qowdhan oo ka tirsan isla kooxda Aaran Jaan, waxaana uu dalbaday ciidamo halka Karaash gaadiid dagaal iyo ciidamo badan uu soo dhoobay duleedka Garowe.
Xarunta Baarlamaanka, madaxtooyada iyo wasaaraddaha ayaa bartilmaameedka Karaash lagu sheegay hadii madaxweyne Denni iyo saaxiibadiis ay sii xoojiyaan dhaq dhaqaaqyada ka dhanka ah Axmed Karaash.
Wararka qaar ayaa sheegaya in uu haysto Axmed Karaash taageerada 30 xildhibaan, kuwaas oo saamayn ku leh Baarlamaanka dhexdiisa oo qayb ka noqon kara wax ka badalka xiisadaha haatan taagan hadii ay dhacdaba in mooshin laga geeyo xarunta Baarlamaanka.
Saciid Cabdullaahi Denni ayaa dhankiisa isna wada dadaalo aad kala hadh lahayn, waxaana ciida kadib loo balansan yahay in dhinacyada khilaafku u dhaxeeyo la isku keeno si loo heshiisiiyo balse xaalka haatan taagan ayaa u muuqda mid halistiisa wata sababi karana isku dhac siyaasadeed oo hor leh maadaama labada hogaamiye uu mid walbaaba taagan mawqif adag.
Isimadda dhaqanka Puntland ayaa ka digaya in khilaafku uu sii xoogaysto gaadhana heer halis ah, kaas oo saamayntiisa laga dareemayo gudaha Puntland.
QORI IYO QAACIISA WAA LA ISLA TUURAA..
DHULBAHANTE waa qowlaysato.. Reer PUNTLAND ma aha..Reer SOOMAALILAND ma aha.. DHULBAHANTE have no specific mission..nor special political objective.. They only know well where the sound of cents rings out.
Believe or not believe, whole of DHULBAHANTE are not in position to afford USD 100K.
Waxaa keliya ay yaqaaneen MAJIN QAAD AH iyo DHILO LALA MARJEEYO.. iyo Nin ay u soo jaajuusaan..Sidee JAALLE SIYAAD…
Waa wax lala YAABO. Aqoon yahay suuban ma laha… Aqoon yahankoodu.. Waa Cali Billi… oo daasad la wzreegayaa… Aqoon yahankoodu.. Waa CALI CIISE… oo hal kurse ka helay Baarlamaanka PUNTLAND.. Waa Maxey micnaheedo… Waxba laguma aamina karo….
WA BILAAHI TAWFIIQ..
Shaanshi lagend says:
Majeerteen nikooda iyo dumarkooda waa isku dhaqan waa waxa wada khaniis ragoodu u noqdeen dhuloos caradan wuu ku noola daain abid ka hor inta majeerteen laga soo garcin naagti amaxaarada ahayd marka aqoon baa kuugu dhiman dhullos adiga iyo dhabayacda aad ka soo farcantay..
Horta hadad shaanshi tahay qaniisnimo Iyo nin bidixda ka xsragooda idinka ayaa latdinku ogaa meeshan na waxaad u timid in lagugu dhex waso,lakiin anagu khaniisiinta ma wasno waliba adoo qaniis ah oo shaanshi uraysa ah ayaad afkaaga uraya majeerteen KU soo taagaysa hadaad qaniis dhulbahante oo isqarinaya tahayna anagu qaniisiinta waa dilnaa dhulbahante garoowe waxba kama ahan puntland waxba kama ay ahan waa calooshood u shaqaystayaal puntland Iyo somalilland u kiraysan dhulkoodana qaarna puntland baa haysata qaarna somalilland ayaa haysata karaash na waa la karbaashaysaa odaygaa xun ee afku marooray ee naftu ka sii dhacayso inuu majeerteen ba idilay dhahuu rabaa waana uu marayaa wadaadii dhoobo daareed uu maray pich
Liibaan siciid shabac says:
waa in layska dhiciyay deni iyo fidnada uu ka wado puntland ee ciyaal suuqnimada ah, waa nimaan dhaqan dawladnimo lahayn aan xishoon, jaahilnimadu ku badatay, wuxuu dhaco raadinaya, shirkadii Tawfiiq ayuu soo dhacay puntland wuxuu ka dhigay dukaan uu furtay isaga iyo walaalihii, waa nimaan waxba deeqin wax a hambeeyn, waxba maqal, cid ceshatana la arag, Tolkien ka falaagoobay, xabad baa edbisee karaashoow garaac duliga waana ku garab taaganahay af iyo adinba.
@ Barawani King
Naara-afuuf! Haddii aad Barawaani tahay maxaa ku dhexgaliyey Harti? Maxaad Dhulbahante oo dhan u aflogaaddeynaysaa? Karaash waa shakhsi, mana aha madaxweyne Dhulbahante si dimoqoraadi u doortay, wakiilna kama aha.
Allaah ka sokoow, haddii aan Dhulbahante jirin, adiga iyo inta kula midka ah waxaa maanta qoorta idiin surnaan lahaa macatab (cross).
Inta dhoollacaddeynaysa iyo inta u mashxaradaysa in dagaal dhici doono, war fiican baan idiin hayaa — waad hungowdeen. Dagaal dhicimayo, Ishaa Allaah. Reer Puntland ma aha dad caadifad salfudayd qaadi karaan.
Axmed Abdiweli says:
Deni waa nin xun oo macagag ah oo jecel in uu isga kaligii uun uu taloyo. Harti waxbuu wada dhistay waxbuu wadaagaa isaaq oo harti kasareeya xaga amtirsiga ayaa maamul wada dhistay iyagoo isu laayey habar habar is cunay dumar uurka leh caloosha kasoo qubay markaa hartiga waxaaan leeyahay ninka deni waa nin aan taariikh aan ogeyn .
Dad badan oo reer koofur ah idoor ah baa meesha ka catamaya halaga feeg jignaado
laayaha hawiye says:
ninkaa axmed cabdiweli baa wax fahansan war deni halayska qabto waa ninkii putland ridi lahaa
Taladu waa inuu karaash baxo
@@@ Barawaani king “Ex. Cismaan Maxamuud Qardho” kkk
Marka hore nimankan masaakiinta ah ee aad gelineeyso, eed aaysan xamili karin iyo Dhulbahante ku xeeyraama u dhig dakane ha geline! Kkk
Marka xigta, Hartiga oo aay Koofur kaga furantahay, weerar joogto ah iyo hagar daamo Hawiye, sidoo kalena aay dhan Waqooyi kaga furantahay mid Iidoor, ha u Durbaan tumin colaad dhexdooda.
Ee la hadal ninkan Daamanka dhagaxa leh ee ah ina adeerkaa, ee hadba nin laacaya oo raggu heshiisii.
Waan ogahay oo haddii uu xaal xumaado, nimankiinan reer Bari colaad iskuma fiicnidiin oo sidiini baad dhihi doontaan markaad nin dhintay maqashaan “Ar bowe ma Durba” ee Dad Colaad ha iga gelin! Kkkkk
Isaaq hadii uu colaad u heyn lahaa Majeerteen hal habeen Puntland may sii jirteen; laakiin gabood ayey Majeerteniya ka dhigtaan. Alle ha ku saamaxo.
Barawaani king kaalay mooska ii Jaq walaashana horay oogu soo wad run… qaxaabad baa hoyada ahayde zanzibaar laga keenay😎😎😎😎
Dastuurka waa in la raacaa. Qofka macalinka ah soomaaliya wuxuu wataa ul, waana ma qaldame, sidaa darteed Siciid Deni waxaa moodaa inuu lasoo baxay Macalinimadiisii, Axmed Karaash waa ka saxan yahay Puntland-na waa la wada leeyahay maaha meel koox ama qof gaar ah leeyahay. Waa in la is ixtiraamo oo wax badan la xeeriyo oo KARAASH waa Waa asxaabtii DAGAALKII KALSHAALE kasoo qayb gashay ee shidada laga daayo si dhab loo wada hadlo oo wixii khaldan la saxo. Ogaada:- anigu reer SOOL maahi laakiin runta uun baa sheegi.
Acww marka hore illahay ka baqa siyaasada haku wareerina.
@A.A.Xade reer Gedo miyaa tahay?qoladaan dhibkooda ma jeclid non tol ah baa tahay Gedo ama Jubaland danbas baad la jeceshay sidee wax u jiraan?
Dani wax ma maamuli karo Puntland wuu dumin doonaa.Federalku waa wax isku darsi Dani xaq uma lahan wuxuu doono inuu sameeyo reer Puntland halkaas ha xaliyaan.
Centralized system iyo dictatorship waa dhamaaday
Dadkan meesha ka caytamaya ama beenta sheegayaa miyaaney hadey Allihii uuntey ka biqi waayeen, Fadliga Bishan Ramadan ee Karaamada leh ee gebogeboda ah iyo Muslimiinta Sooman ka xishooneyn?
Waar wax isku Fala oo cayda iyo beentaba Joojiya.
Inkasta oon anigu hubo inaanu dagaal ba’ani dhici doonin oo Kol hadey Isimadu soo dhexgaleen arinta la furdaamin doono, waxaan dhab ahaan aan aad u jecelahay inaan ogaado sida gartu ay u dhacdo. Keebaa Deni iyo Karaash khaladka lagu heli doonaa? Midkoodee lagu khasbi doonaa inuu dhega adeyga iyo qalafnaanta iska daayo?
Mid weynu hubnaa oo Dastuurka Puntland wuxuu qeexayaa in Madaxweynuhu la tashado ku xigeenkiisa kolkuu Dawlada soo dhisayo. Taas oo ay ku jirto xil magacaabis, ka qaadis iyo isku shaandheynba. Dastuurku’se ma qeexin ilaa iyo heer xadiga la tashigu gaadhsiisan yahay. Mana kala cadeynayo in hadii is mari waa yimaado uu Madaxweynuhu tiisa ka raaci karo iyo inuu u dabranaanayo ilaa iyo ay isfahan ka gaadhaan arinta.
Hadiise dhan laga eego qawaaniinta caalamiga ah ee kala haga hogaan Sare oo Maamul, Madaxweyne iyo Ku xigeenkiisa waxa had iyo jeer awood badan Madaxweynaha. Labadooda Markey noqoto Madaxweynaha ayaa go’aanka kama danbeysta ah leh. Ku xigeenku hadii uu ugu bato talo ka dhiibasho ayaa lagu qadariyaa. Haduu is faantaari is yidhaana aar saaxiibow is casil ayaa lagu yidhaa amaba waxa laga xidhaa albaabada gebigiisaba oo kelmad baa ugu yare aanan laga neefin. Ka kartida leh ee jooga wadan Sharcigu ka shaqeeyo oo Dimuquraadi ah hoosta ayuu siyaasiyan kala xafiiltamaa si uu Madaxweynaha isna sumcada uga ciyaaro oo uu indhaha shacabka kusoo jeediyo.
Xanshashaqa iyo wararka meelahaas lala meereysanayaa waxay tibaaxayaan in Karaash Deni ku Xujeeyay in isaga looga dambeeyo masuuliyiinta Dhulbahante marka la magacaabayo iyo kolka xilka laga qaadayo. Hadey arintani dhab tahay dee Karaash ayaa khalad leh. Haday sidoo kale khilaafku ka imanayo Karaash oo leh waa in cidii la magaabayo ama xilka laga qaadayo ama la badalayo anoon ‘haye’ la iga helin mooyaane waxba ma soconayaana dee isagaa gardaran. Karaash kolkaas waxa uu isa siinayaa Veto power uu wuxuu doonana ku hot istaago wuxuu doonana ku fasaxo. Hadiise Deni diidan yahay inuu la tashi la sameeyo Karaash aname aanu tixgelin siineyn, kolkaas Deni ayaa gardaran.
Inteynu ogsoonahay ama aynu aragney, Deni waa nin qabweyn oo cadhadu fooda hore ka saaran tahay. Waayo dhaqankiisii Baarlamaanka uu kaga huleelay iyo sidii xumeyd ee uu Dhoobo Daareen uga takhalusay ayaa markhaati inoogu filan. Inkasta oo anigu aan Deni wax badan ugu garaabey markey arinta Dhoobo Daareed timaado, waayo Dhoobo Daareed waxa uu la shaqeynayaa Farmaajo. Inkasta oo uu iska dafirey, wareysigiisii ugu danbeeyay ayaa lagala dhex bixi karaa inuu kasoo horjeedo qayaxan kala horyimid Dawlada Deni. Hase yeeshee foolxumo, foolxumo kale laguma masaxee, waxey aheyd inuu Deni si ka wacan uga takhaluso Dhoobo Daareed. Sax iyo Khaladba Deni ayay fawaaxishnimadaasi ku shaanbadeysan tahay.
Kolkaas hadii Deni khaldan yahay oo aynu ognahay inuu xitaa xabad ridi karo si’uu uga takhaluso ciduu rabo, sidey Isimadu iyo waxgaradka kale ee Reer Puntland Deni u liqsiin karkaan inuu qirto khaldkiisa oo uu candhuuftiisa dib u liqo, Karaashna la tashado? Hadiise uu ku adkeysto tiisa, ma jirtaa talaabo u furan Isimada iyo Baarlamaanka oo ay Deni khasab ugu xakameyn karaan intaanu qas iyo khalalaase baaxadweyni dhicin?
Hadiise Karaash khaldan yahay oo uu tiisa ku adkeysto si dhib yar malooga takhalusi karaa isaga. Awood intee le’eg ayuuse ku dhex leeyahay Puntland?
War jiraaba, cakaaruu iman! Khilaafkani weligiis taagnaan maayo. Cid uunbaa guuleysan doonta. Sida loo soo afjarona intii Alle ku simo weynu u wada joognaa.
Anigu waxaan kusoo gunaanadayaa duco. ALLOW SI WACAN OO XEEGONA XEEGO U NOQOTO, ILKONA KU BADBAADAAN XAAJADAN KUSOO AFJAR.
Aamin Yaa Rabbi 🤲.
Waar dagaala qaadimaysaane fadh fadha jooja. Salacalee.kkk kkk kkk
CAAYDA HA LA JOOJIYO..
KARAASH ha soo xoreeyo LAASCAANOOD. Ha soo xoreeyo Hablihii 100 halaad iyo barqabkoodii iyo qorigii lagu raaci lahaa oo IIDOOR WAQASHLE kufsanayo..Mase MAJEERTEEN buu xoog u leeyahay.
Waa ku garanaaa.. waxaad tahay IIDOOR LIQE..
Ani kula hadlimaayo… Kula caaytami maayo… Waxaanse ku leeyahay.. car soo xoreeyo Walaasha JAAMAC SIYAAD ama AXMED GARAAD oo IIDOOR WAQASHLE ku kufsanayo LAASCAANOOD.. Markii aad soo xoreeyso caaydaado maqal beey léedahay.. inta kale fulay caaytamaya Lee waayeee. FULAY…
Kadhaaf baad bixinaysaa sala calee. Marna dadkaa wacdiyaysaa oo leedahay ha caytamina marna adigii baa wasakh tufaya.kkk Xagaad ku aragtay Idoor gabdho kufsanaya? Ma siidhi wale ayaad ahayd? Waar xishood Dhulbahante waa dad sharaf leh dhulkooday degan yihiin. Isaaq & Dhulbahante waa dad is dhalay oo dhul & dalba wadaaga.
Intaa naga soo luntay (isqaxisay iyadoo cid qasabtay jirin) dib noogu soo mastaafuriya.
Hakeem ahayd YOOCADDA? Ma dhul HARTI Mase dhul IIDOOR?.
Magscass ma sheegateen hadii aadan saarneen AWRKIRAALE.. JAAMAC SIYAAD.. oo dhabarkii hoormay..
Maxaa MAJEERTEEN loo haaystaa.. marki hiilo soo qaaday..soo tii AWR KIRAALE DHULBAHANTE dhabarka laga wada toogatay..
Qoladan (Puntland) dhib lama jeclid oo nin tol ah ayaad tahay, Gedo iyo Jubalandna Dambas in aay noqdaan ayaad jeceshahaye waa sidee?!!!!
Hanuuniye, haa reer Jubaland ayaan ahay qaasatan gobolka Buuraleeyda ah ee Gedo ayaan ka soo jeedaa.
Haa oo qolodan (reer Puntland) iyo qolo kale oo Soomaali ah toona dhib lama rabo, oo qolo kasta in aay iimaansato wuxuu Alle yiiyey ayaan qabaa!
Maya dhib saxar la eg uma rabo Jubaland in uu gaaro oo waaba hooyga aan ka soo jeedo.
Laakiin waxaan si aanan gabbasho la hayn oga soo hor jeedaa, Farogelinta salkeedu yahay, Federal ladirirka iyo jifo hoose u xaglinta ee Jubaland ku wajahan ee aay Farmaajo iyo kooxdiisa wadaan,waana ka soo horjeedi doonaa.
Marka, haddii aay taas tahay, baaba’a aad sheegtay ee aan Gedo iyo Jubalnd la rabo, haddee isku Dooni ma saarnine, bal waxa aad wax dhisid u taqaano wado oo wax ha iga siinin faa’iidadeedu!
Sixid: Ma siidhi wale ayaad ahayd = Ma siidhi wale ayaad u ahayd.
Waxma garatada qabaa’ilka meesha ku caayaysa ha ka fiirsadaan waxa aad qoraysaan. Ogaada Deni waa shaqsi, Karaashna waa shaqsi. Labada beelood ee Dhulbahante iyo Majeerteen waa dad wada dhashay 50 sano ee lasoo dhaafayna waxaa laga shaqaynayay kala fogeyntooda. Kuwa hadda meeshan ka caytamaya ee iska dhigaya inay labada beeloodyihiin waa cadowgiina idinkana qaar idinka mid ah oo wax ma garata ah ayaa caydii iyo aflagaadadii qayb kasii noqonaya!!
Ramaadaan baa lagu jiraa markaas baad reero islaameed oo sheekh iyo khariifleh u wada caayaysaan sababtoo ah mid jiritaankiina neceb oo idinka iska kiin dhigaya oo munaafaq ah baad wasakhda uu halkaan kusoo qoro ka ficil qaadanaysaan.
Joojiya isku dirka dadka wada dhashay oo garta cadowgiina dhabta ah. Labadaa nin ee masuuliyiinta ahina haddaynu nahay reer Puntland way ina wada matalaan sistamkaas iyo dadka caqliga u ah baana kala saaraya insha Allah.
Ogaada cadawgiinu waaka dhulkiina taako taako u qaadanaya shaashadda dabadeedana iskaga kiin diraya kaa ka tashada.
Ha hilmaamina Maah maahdii waxay ahayd : DOQONI HAL IL BAY LEEDAHAY ISHAASNA KA UGU XIGA AYAY ISKAGA ILAALISAA.